Vehivavy porofo mangatsiaka porofo Factory, mpamatsy | China Vehivavy mpanamboatra akanjo mangatsiaka
Lehilahy palitao porofo mangatsiaka
Palitao milomano malefaka / landihazo
Lehilahy mahia landihazo / Windbreaker
Palitao porofo mangatsiaka an'ny vehivavy
Palitao milomano marevaka / landihazo
Vehivavy landihazo / mpamaky rivotra
2021 fararano sy ririnina vaovao ...
2021 fararano sy ririnina ...
2021 fararano sy ririnina manify ...
Ny vehivavy lava be ...
Autumn / ririnina lamaody vaovao vehivavy tarehin-tarehy mamirapiratra palitao fohy voaroaka, palitao landihazo 113
Ity maodely ity dia mampiasa lamba mamirapiratra metaly futuristika handikana ny fironana avant-garde amin'ny lamba. Tena tian'ireo tanora vondrona mpanjifa izy io. Fiarovana amin'ny lamaody sy ny hatsiaka, miaraka amin'ny fomba samihafa.
Akanjo lava sy volon'ondry lava lava an'ny vehivavy amin'ny fararano sy ririnina, palitao landihazo 102
Miaraka amin'ny fanatsarana hatrany ny hatsaran'ny besinimaro, dia nandinika bebe kokoa ny antsipirian'ny fitafiana ny olona tato anatin'ny taona vitsivitsy, ary ny hatsarana dia tsy maintsy hatsaraina koa amin'ny lafiny fampiasa sy fampiharana. Taorian'ny fanitsiana maromaro, ny mpamorona an'ity akanjo ity dia nisafidy lamba sy lamba firakotra avo lenta, ary natambatra tsara ilay endrika famolavolana tady malaza amin'ny singa loko mifanohitra.
Akanjo tsotra sy volon'ondry vaovao an'ny lohataona sy ririnina an'ny vehivavy, palitao landihazo 081
Ity akanjo ity dia miavaka amin'ny mahitsy miakatra sy midina, mamorona tsipika mahitsizoro, manarona ny fiolahana amin'ny tratra, andilana, vody ary faritra hafa. Tsy manidy ny andilana, ny dikan dia madio, mahazo aina ary mahazatra. . Ny akanjo ankapobeny amin'ny akanjo miendrika H dia tena kanto, miaraka amin'ny toetrany mahitsy sy miakatra, mahatonga ny olona ho mahia sy tsara tarehy, ary taratry ny fomba isan-karazany.
Ny fararano sy ny ririnina lamaody vaovao an'ny vehivavy geometrika dia nametraka palitao lava miorina amin'ny palitao, palitao landihazo 076
Nandritra ny taona maro, ny orinasanay dia nifikitra hatrany tamin'ny fitsipiky ny kalitao voalohany, ary ny antsipirian'ny vokatra tsirairay dia nodinihina matetika. Ny fepetra takiana amin'ny kalitao henjana dia ny fampisehoana vokatra avo lenta ho an'ny mpanjifa ihany. Ny kinova kilasika sy tsotra dia tsy mahafa-po fotsiny ny filàna hitazomana ny hatsiaka, fa tsy hihena koa.
Palarano sy ririnina vehivavy vaovao diagonal quilted lapel capless mafana akanjo palitao, landihazo palitao 030
Ny toetra mampiavaka ny akanjo dia mahitsy miakatra sy midina, mamorona drafitra mahitsizoro, manarona ny fiolahana amin'ny tratra, andilana, vodiny ary faritra hafa. Tsy manidy ny andilana, ny dikan dia madio sy milamina, maneho hatsaran-tarehy milamina sy kanto, mahazo aina sy mahazatra. . Ny akanjo dia tena tsara tarehy ary mahatonga ny olona ho mahia sy tsara tarehy.
Akanjo lava fararano / ririnina lamaody vaovao an'ny vehivavy amin'ny akanjo lava midadasika, palitao landihazo 015
Nandritra ny taona maro, ny orinasanay dia nifikitra hatrany tamin'ny fikatsahana ny kalitao voalohany, ary ny kalitaon'ny vokatra voafehy tsara. Na ny endrika, ny kinova, ny famokarana ka hatramin'ny vokatra dia mifehy tanteraka izahay ary manolotra vokatra mahomby amin'ny mpanjifa.
2021 fararano sy ririnina manintona palitao landihazo palitao fohy, palitao 280
2021 fararano sy ririnina ny vehivavy misy akanjo lava fohy miadana, palitao landihazo 107
Ny lamba dia vita amin'ny lamba polyester avo lenta, izay mahazo aina amin'ny fikasihana, mahazaka ketrona, mahatohitra abrasion, henjana ary tsy mahazaka rivotra. Malemy ny sosona ary tsy mikorapaka.
2021 Fararano / Ririnina mitafy lamaody akanjo lava fohy palitao, palitao landihazo-102
Ny orinasanay dia nanao raharaham-barotra fanondranana entana ivelany nandritra ny taona maro, indrindra amin'ny fikarohana sy fampandrosoana, famokarana sy fitantanana ny tampon'ny lehilahy sy vehivavy ny tanora sy ny lamaody. Ny orinasanay dia manambatra ny filan'ny mpanjifa amin'ny famolavolana akanjo, asa-tanana ary lamba, ary mampiditra tsy tapaka ny vahaolana amin'ny famolavolana akanjo mifanaraka amin'ny toetran'ny mpanjifa tsirairay, izay azo ahitsy arak'izay ilain'ny mpanjifa.
2021 fararano sy ririnina manazava loko mamirapiratra lamaody tsara tarehy palitao lava matevina, palitao landihazo 087
Miaraka amin'ny fomba fijery tsy manam-paharoa, fahatsapana lamaody maoderina ary ny tsiro kanto faran'izay ambony, ny mpamorona dia nanandrana namolavola vokatra amin'ny fomba isan-karazany fa tsy teritery amin'ny fomba lamaody manokana. Avelao ny palitao midina hanala ny fiasan'ny hafanana madio. Ny silhouette, ny asa tanana sarotra ary ny asa kanto ary ny kilasy voalohany dia nanjary ny antsipiriany famolavolana ny palitao nidina. Ny fomba palitao midina noforonin'ity dia sady manana fampisehoana mafana sy fahatsapana lamaody. Ny vokatra rehetra dia fikarohana ny lamaody ...
2021 fararano sy ririnina lava palitao quilted lamaody midina palitao, landihazo palitao 067
Ny fomba mahazatra dia havaozina, ary ny volavolan'ny volavola dia manamafy ny fiasan'ny fampiononana sy ny hafanana. Tamin'ny famolavolana, nesoriny ireo kilema mibontsina sy tsy hita maso, ary nanala hatrany ny hafanan'ny lamaody tamin'ny ririnina.
2021 fararano sy ririnina miloko marevaka mitafy akanjo tsotra sy lamaody fohy fohy 053
Amin'ny ririnina mangatsiaka dia azonao atao ny mijery an'io, ny zaitra mihaja, ny rivo-piainana mahafinaritra.
Tsotra ny fomba fanao, saingy kanto izy io ary tsy tery mihitsy. Fonosina tsara izy io, manana fahatsapana ho lehibe, mafana sy mahazo aina.
Telefaona ： +86 13522355655
Mailaka ： katya777 @ aliyun.com / guoyuan4018 @ 163.com
Adiresy ： Room 3082, tsenan'ny akanjo Tianya, No.2 Yabao Road, Distrikan'i Chaoyang, Beijing, Sina